အိမ်သာမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပိုး7မျိုး - Myanmarload
အိမ်သာမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပိုး7မျိုး
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ က 17:40 June 19, 2017
ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကအိမ်သာပဲဖြစ်စေ ၊ခရီးသွားရင်းလာရင်း အိမ်သာပဲဖြစ်ဖြစ် လေထဲကမမြင်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေက ရှိနေနိုင်တယ်နော်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချက်လေးတွေ သိထားရာမှ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရမှာပါ။
ယနေ့ခေတ်မှာ အိမ်သာမှတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါဖြစ်ပြီး အိမ်သာထိုင်ခုံတွေကမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးက အူထဲကိုဝင်ရောက်ပြီး အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
E.coli ကဲ့သို့ပဲ ဒီရောဂါပိုးကလည်း အိ်မ်သာထိုင်ခုံတွေကတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးက2လလောက်အထိရှင်သန်နေနိုင်ပြီး ကူးစက်ခံရသူမှာ အနာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ Staph ကအစပိုင်းမှာတော့ ကြောက်ဖို့မကောင်းပေမယ့် မကုသဘဲကြာလာရင် အဆုတ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်စေပါတယ်။
လူထဲမှာဆိုရင် ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးကို လည်ချောင်းထဲမှာအတန်းလိုက် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အိမ်သာထိုင်ခုံတွေကတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင် အကွက်များထခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း စတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရစေပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ မိန်းမကိုယ်ကိုဝင်ရောက်တဲ့ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာကတော့ မိန်းမကိုယ်မှ အရည်များဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တွေဖြစ်တဲ့ တံခါးလက်ကိုင်ဖု၊ လက်ကိုင်၊ အိမ်သာထိုင်ခုံတွေကို ထိတွေ့မိရင် လူကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကို သုံးခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကတော့ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
7. Influenza (Flu) တုပ်ကွေး
လည်ပင်းတွေ၊ အဆုတ်တွေကို ထိခိုက်စေပြီးတော့ ညစ်ပတ်နေတဲ့အိမ်သာမျက်နှာပြင်တွေကတဆင့် ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ အအေးမိခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း စတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။
1. အိမ်သာကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားခြင်းနဲ့ ဂရုစိုက်သုံးစွဲခြင်းများဖြင့် အိမ်သာမှတစ်ဆင့်ကူးစက် တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
2. အိမ်သာနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲသန့်ရှင်းစွာထားပါ။
3. အိမ်သာကို အိမ်သာတိုက်ဘရပ်စ်နှင့် ဆပ်ပြာရည်သုံးပြီး ပုံမှန် (တတ်နိုင်လျှင် နေ့စဉ်) အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
4. အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာဖြင့်လက်ဆေးပါ။ မဟုတ်ရင် လက်ကတစ်ဆင့် ပါးစပ်အပါအဝင် နေရာတိုင်းကိုရောဂါပိုးများပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။
5. ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ညစ်ပတ်တဲ့ရေတွေမစင်အောင် အိမ်သာပေါ်မထိုင်မီရေအရင်ဆွဲချပါ။
7. အမျိုးသမီးများတွင် မိန်းမကိုယ်လိမ်းဆေးများလိမ်းခြင်းဖြင့်လည်း အိမ်သာမှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
8. ဆီးသွားပြီးတိုင်းမိန်းမကိုယ်ကို တစ်သျှူးဖြင့်သုတ်ပါ။
9. အောက်ခံဘောင်းဘီနှင့် တဘက်များကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရောဂါအားလုံးက ကုသလို့ပျောက်ကင်းတဲ့အတွက် ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိ ရင် ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ကုသမှုခံယူပါ။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုပြီးကောင်းတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့။
သတင်းအရင်းမြစ် : Dr. Mya Myo Myo Swe
ပျက်စီးမှုကို ဦးတည်နေသော အကြောင်းအရင်းများ
Page generated in 0.0598 seconds with5database query and5memcached query.